Gooseneck Jikada qasabad Chrome
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Soodhadhka Qulqulka / WOWOW Gooseneck Jikada tubada qasabadda Chrome
WOWOW Gooseneck jikada Qufulka Chrome
Markii tuubada qasabadaha jikada soo jiidaan ay kala baxaan, riix garaac si aad u xirto ilaha biyaha markii ugu horeysay.
Filter filter-ka wuxuu ka dhigayaa biyo jilicsan, biyo badan oo shaqeynaya, oo waxtar badan.
2311701C tilmaamaha rakibaadda
Qasabadaha jikada ee jikada 2311701C jiidista waxay ka samaysan yihiin bir qafiifa iyo nadiifinta rasaasta. SUS304 waa deegaan ahaan jawi wanaagsan oo caafimaad qaba. Caafimaadkeenu wuxuu kuxiranyahay ilaaliyeyaashayada. Waxaa lagu hagaajin karaa wareejin kulul iyo qabow, fududahay in la beddelo, fududahay in la rakibo, classic iyo xarrago leh, waxayna ku habboon tahay qurxinta musqusha iyo jikada kala duwan.
U jiid sidii aad jeceshahay, aad ugu habboon burushka iyo saxamada dhaqda, weelka biyaha lagu qubeysto, tubbada / tubada biyaha ayaa lagu beddeli karaa dardaaranka, bir-dhiska bir-abuurka bir-adayga, xudunta xoogan ee joogtada ah iyo waarta
Baakadaha wax soo saarka waxaa ka mid ah: tubbada biyaha, tuubbada, dubbe miisaanka, salka, qalabka rakibaadda
SKU: 2311701C Categories: Qubeyska jikada, Soodhadhka Qulqulka Tags: 1 Hood, Chrome, buufiye
60 x 30 x 7.5 cm; 2.94 kiilo garaam